မနက်စောစော ရေနွေးပူပူတစ်ခွက် သောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ၅ ခု - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
လူတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတာက မနက်ဆိုရင် ရေတစ်ခွက်သောက်တာ ၊ ကော်ဖီနဲ့ တစ်ခြားလက်ဘက်ရည် သောက်တာတို့လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မနက်ခပ်စောစောမှာ ရေခပ်နွေးနွေးလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်လိုက်တာကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများစေပြီး ဟာ နေတဲ့ အစာအိမ်အတွက် အကျိုးအများကြီးရှိစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မနက်စောစောမှာ ရေနွေးသောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁. အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးခြင်း
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်တာကို ဘယ်သူမှတော့ မလိုချင်ကြပါဘူး။ အဆိပ်ဓာတ်များနေတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကတော့ အိုမင်းမှုကို အလျင်အမြန်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ရေနွေးသောက်ခြင်းက ခန္ဒာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ အဆိပ်ဓာတ်အစုအဝေးကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် အရေပြားဆဲလ်တွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းစေပါတယ်။
ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ ရေနွေးနဲ့ ကပ်ပေးသလိုပါပဲ။ ရေနွေးသောက်ခြင်းကလည်း ကိုယ်တွင်းနာကျင်မှုတွေ သက်သာစေပါတယ်။ အစာအိမ်ကြွက်သားတွေ တင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဓမ္မတာလာစဉ် နာကျင်မှုကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ကြွက်သားတွင်း သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း ပိုကောင်းသွားစေပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဝိတ်ချနေတယ်ဆိုရင်တော့ မနက်စောစောရေနွေးတစ်ခွက်လောက် သောက်တာက အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။ ရေနွေးဟာ သင့်ကိုယ်အပူချိန်ကို မြင့်လာစေလို့ ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်နှုန်းကိုလည်း မြန်ဆန်စေပါတယ်။ မြန်ဆန်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ကယ်လိုရီတွေကိုလည်း မြန်မြန်လောင်ကျွမ်းသွားစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေနွေးသောက်ခြင်းက ဝိတ်ကျစေပါတယ်။ အစာချေဖျက်နှုန်းကိုလည်း မြင့်တက်စေတာကြောင့် စားတိုင်းအစာကြေလွယ်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်ကို အထောက်အကူပေးမှာပါ။
၄. သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းစေတယ်
အာရုံကြောတွင်း အညစ်အကြေးတွေနဲ့ အဆီတွေဟာ ရေနွေးသောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံး အပြင်ကို စွန့်ထုတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အခုလို အဆိပ်ဓာတ်တွေ လျော့သွားတာဟာ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အထောက်အကူပြုပြီး ကြွက်သားတွင်းကိုလည်း သွေးများများရောက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ချင်စိတ်ကိုလည်း ထ်ိန်းပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်သလို ခံစားနေရရင်တော့ ရေနွေးနှစ်ခွက်လောက် မနက်အစောပိုင်းမှာ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ အစာအိမ်ဟာ ရေဓာတ်ခမ်းပြီး အလုပ်ပုံမှန်မလုပ်တော့လို့ပါ။ Bowel movement ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို အစာအိမ်က မပြုလုပ်ချိန်မှာတော့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ ရေနွေးဟာ Bowel လှုပ်ရှားမှုကို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေပြီး ဝမ်းကို ပြန်မှန်စေပါတယ်။ အစာအိမ်ကြွက်သားတွေ အလုပ်ပုံမှန်ပြုလုပ်အောင်တော့ ရေနွေးကို ပုံမှန်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ ဘာမှခတ်မထားတဲ့ ရေနွေး တစ်နည်းအားဖြင့် ရေနွေးဖြူကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ :D
Ref : Health Life